2013 – A Decade in Art- Bidhata K.C | Jupiter Pradhan
विधाताको एक दशक कलामा
Art Exhibition and Presentation by Bidhata K.C.
Sarwanam Art Gallery, Sarwanam Theater, Kathmandu
March 1, 2013 to March 28, 2013
Curate by: Jupiter Pradhan
विधाताको पात विम्ब
प्रकृतिका पवित्र पातहरूसँग कलाकर्मी विधाता के.सी. को पहिचान भएको धेरै भयो । सुकेका पात हुन या हरिया उनले यिनै पातहरूमा जीवन्त जीवन भेटिन । त्यो भेटाई पनि प्रकृति जस्तै निश्चल र निर्मल छ । त्यसैले त विधाताको क्यानभास पात पहिचान बनेको छ । आफ्ना क्यानभास र कागजमा उनले तिनै पातका विविध आकार र आकृतिहरूलाई उतार्दै आएकी छन् । उनको यो क्रमागत शृङ्खलाबद्ध कलाकर्मले आफैमा गौरवमय चित्र र चिनारीको क्षितिज निर्माण गरिदिएको छ । यसमा उनको एक्लो सन्तुष्टि समाविष्ट भए पनि हजारौ मनका आनन्द त्यहाँ पाउन सकिन्छ । आफ्नै मात्र एक्लो खुसीमा अब अरूहरूका आँखा पनि आकर्षित भएका छन् ।
वि.सं. २०६६ सालमा उनले पाँचौं एकल चित्रकला प्रदर्शनीमा प्रवेश गर्दा अझ गजबको पात सौन्दर्यलाई कलामा भित्रयाइन् । यो उनको खोजीको प्राप्ति थियो । अनेकौं असन्तुष्टिबीच सन्तुष्टि सङग निकट उनको कलायात्रा आफैलाई परिष्कार पार्ने कार्यमा पनि संलग्न थियो । त्यस प्रदर्शनीमा उनको पात प्रेमका भाव क्यानभासभरि रङ र रेखाका सुन्दरतामा सजिएर आधुनिक भाव र भाषा सम्प्रेषण गर्न अग्रसर थिए । पातहरूमा प्रेमपूर्ण यौवनका जीवन थिए । पातहरूमा जीर्ण जीवनका सुस्केरा पनि थिए । एक प्रकारको प्रकृति र जीवनको तुलनात्मक कलारचना मिश्रित माध्यममा साकार आकार प्रदान गर्न सार्थक थिए । त्यसमा उनले परिवर्तनशील समय–विम्ब पनि उतारेकी थिइन । जीवनको सग्लो चित्र र चरित्र त्यहाँ थिए ।
कलायात्राका सन्दर्भमा उनी धेरै ठाउँ पुगिन । त्यसमध्ये उनी मनाङ–मनास्लु कलायात्रामा जाँदा अनौठा प्रकृतिसँग साक्षात्कार हुन पुगिन् । ती निश्चल प्रकृतिले उनलाई प्रभावित गरे । हावाले उडाएर झारेका पातको जीवन देखेर उनलाई त्यसप्रति दया जाग्यो । उनले मान्छेको जीवनसँग त्यसलाई तुलना गरिनँ । हामीले वास्ता नगरेको वा कहिल्यै प्राथमिकता नदिएका तिनै पातप्रतिका प्रेममा उनी अब मज्जैले नजिकिन चाहिन् । प्रकृतिसँगको विचित्रता र तिनका खास स्वरूप र रङलाई कलाकारले पक्रिएर काम गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता उनी सामु उपस्थित भए । तर त्यो फरक मौलिक र नवीन हुनु आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता उनको छ । यही मान्यतालाई अघि सारेर उनी कलाकर्ममा मग्न रहन्छिन ।
सन् २००६ र ७ मा उनी एशियन आर्टिष्ट फेलोसीप प्रोग्राम अन्तर्गत् कोरियामा पुगेकी थिइन् । त्यहाँ गएर कलाकृति बनाउने र कलागोष्ठीमा छ महिनासम्म रहने अवसर पाएकी थिइन् । यसले कलालाई हेर्ने, बुझ्ने र व्यक्त गर्ने धारणामै परिवर्तन आयो । त्यहाँ उनले दुई पटक प्रतिस्थापन कलाको प्रदर्शन समेत गरिन । पटक–पटक नेपालमा पनि उनका प्रतिस्थापन कला प्रदर्शित भए । इटलीको प्रसिद्ध सहर भेनिसमा समेत उनका प्रतिस्थापन कलाले सार्वजनिक हुने मौका पाए । उनको विचारमा कला भनेका अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति पनि हो । अनि सौन्दर्यको कलात्मक उपस्थिति त्यहाँ हुन्छ र त्यसले हेर्ने मान्छेलाई रमाइलो अनुभूति प्रदान गर्न सक्दछ ।
कलाकार विधाता के.सी. सन् १९९८ देखि सामूहिक कलाप्रदर्शनीहरूमा भाग लिन थालेकी हुन् । प्रारम्भमा उनले बनाएका चित्रहरू प्रायः दृश्य प्रधान, विभिन्न कामका क्षणहरू, सांस्कृतिक चित्र आदि थिए । त्यसपछिका केही वर्षसम्म उनको कलाकारिता सामाजिक चालचलनका स्वरूपलाई कलामा उतार्न तल्लीन रह्यो । त्यसबीच केही चित्रमा पात विम्बको प्रवेश भएको पनि अनुभव हुन्थ्यो । एक्रेलिक र तेलसँगै इचिङ प्रविधिमा पनि कलारचना गरेकी उनले सामूहिक सहभागिताको उपलब्धिमूलक सफलता भेटेकी छन् । त्यस्तै थुप्रै कला कार्यशालाहरूमा उनको सक्रियता कलासिर्जनाको अर्को अवसर हो ।
यस्ता धेरै कला कार्यशालामा काम गर्दा अग्रज पुस्ताबाट पाएको प्रेरणा पनि उनको जीवनमा उल्लेखनीय रहेका छन् । समकालीन पुस्तासँग एक–अर्काका भावना साटासाट गरेर गरिने कलाकार्यले पनि आफ्ना कमी कमजोरीलाई सुधार्दै काममा थप नयाँपन दिन सकिएको सकारात्मक क्षणहरू उनीसँग थुप्रै छन् । यसैगरी नेपाली कलाकारहरूसँग मात्रै होइन कतिपटक विदेशी कलाकारका साथ कला कार्यशालामा भाग लिएका रमाइला सिर्जनात्मक कार्य पनि उनको कलायात्राका ऊर्जाशील समय हुन् । यी सबै साथ र सङ्गतहरूबाट उनको कलामा अवश्य नै परिपक्वपन आएको हुनु पर्दछ ।
यसरी कलाकर्मी विधाताले आज आएर आफ्नो स्पष्ट परिचय नेपाली कला जगत्मा दिइसकेकी छन् । प्रारम्भिक चरणमा विविध विषय, माध्यम र शैलीमा कलाकार्य गरे पनि आज उनको मौलिक चिनारी भनेको क्यानभासमा पात विम्वले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । यसैमा उनको लगन र लगानी पनि आज परिष्कारको अर्को अध्यायमा प्रवेश गरिसकेको छ । प्रकृति त्यसमा पनि विशेष गरी पातका बहुआयामिक पक्षमा अझ उनी मौलिक नवीनता भित्रयाउँन प्रतिबद्ध भइरहेकी छन् उनको यही निरन्तरता र अलग्ग कलाशैलीको थप प्रोत्साहन प्रदान गर्दै वि.सं. २०६६ सालमा उनलाई राष्ट्रिय युवा सेवा कोषले पुरस्कृत गरेको थियो । युवा पुस्ताका सिर्जनशील कलाकारहरूलाई आफ्नो काममा अझ जिम्मेवार भई समर्पित हुन हरेक वर्ष प्रदान गरिने उक्त कोषको अरनिको युवा कला पुरस्कार उनका लागि उत्साहित भइरहने अर्को सम्मान थियो । त्यस्तै तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठान अन्तर्गत् कलाकौशल विभागले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने राष्ट्रिय कलाकौशल प्रदर्शनी अन्तरगत वि.सं. २०६७ सालमा उनको ‘मार्जिनलाइजड आइडेन्टिटी’ शिष्र्।क नामक समसामइक चित्रकलाले विशेष पुरस्कार पनि प्राप्त गरेको थियो । हाल उनी स्वतन्त्र कलाकारिताका अतिरिक्त कला शिक्षिका र कला क्यूरेटरका रूपमा पनि व्यस्त छिन् । कतिपय संस्थाकी संस्थापक सदस्य तथा सदस्य रहेकी उनी संस्थागत क्रियाशीलतामा पनि उतिकै सक्रिय देखिन्छिन् भने आफनो कला मार्फत विभीन्न सामाजीक कार्य गर्दै आएकी उनी सामाजीक सेवामापनि त्यत्तिकै समर्पित र चिन्तशील छिन् ।